Ny Fiarahana amin'ny lehilahy amin'ny ankizy ho an'ny famoronana ny fianakaviana
Ny Fiarahana amin’ny lehilahy amin’ny ankizy ho an’ny famoronana ny fianakaviana
Eo amin’ny fiaraha-monina misy ny fomba fijery fa irery ihany no afaka ho i neny. Ny ray matetika mitoetra amin’ny zanany lahy na ny zanany vavy ihany no tao feno ny fianakaviana. Raha ny marina ny fiainana ny olon-drehetra dia hampivelatra ny fomba hafa. Ankizivavy sasany hieritreritra ny Hampiaraka ny olona miaraka amin’ny ankizy. Ny fomba tsara ny hevitra sy ny fomba fampiharana azy. Izay no tena olana, izay dia ho resahina ato amin’ity lahatsoratra ity. Araka ny hitanao izao, ny toe-draharaha mampitombo amin’ny fomba izay miseho sy iray ray. No mendrika ny hahazo nahalala azy ireo, mba hanorina fifandraisana. Inona no fahadisoana mety ho tany mahafinaritra ity, irery ny lehilahy. Izay dia ny maha zava-dehibe sy azo itokisana. Atao. Na izany aza, ny olana dia mety ho ny manaraka izao: tiako ny lehilahy tokan-tena miaraka amin’ny ankizy matetika dia ny hahita mpivady, dia tsy manadino ny fahasambarana ny ankizy. Satria manirery mampijaly tena. Raha misy olona mbola tokan-tena, dia efa tena be dia be ny asa atao mba manome noho ny tsy feno ny fianakaviana. Angamba vehivavy, fa tsy miasa ao anaty ekipa iray, dia toy izany ny olona iray dia tsy hahita ny rehetra dia miankina amin’ny asa. Ohatra, ny mpanamboatra fiara ho amin’ny andro mifandray amin’ny maro ny vehivavy, ny fananana manokana fiara. Ny Papa ihany no afaka hita ao amin’ny misy retail jery. Izy ireo no afaka mivarotra ny hariva akanjo, na zaza vovoka, ny fanadiovana ny vokatra. Kandidà ny marina dia tena hisarika ny saina, raha manana ny fikasana mba hahita ny fiainana mpiara-miasa. Foto-kevitra ny zaridaina, ny kianja, ny baolina kitra eny an-kianja, ny ankizy playgrounds, ny sarimihetsika — tsy eto ianao dia afaka mahita ny maty vady na nisara-panambadiana ny olona amin’ny ankizy kely. Mila ny tsara, ho ela fijery. Mety hihaona amin’ny toeram-pitsaboana — ratsy ny feo, fa raha ny ankizy no marary, mikarakara azy dia mitarika ny Papa, raha toa reny dia tsy eto. Ankoatra izany, ao amin’ny toeram-pitsaboana mora-dresaka amin’ny alalan’ny fametrahana ny zavatra momba ny tabilao ny dokoteran-jaza, ny toetry ny filaharana na ny zava-mahadomelina.»Ny lehilahy iray miaraka amin’ny ankizy mitady vehivavy»- toy ny dokam-barotra amin’ny Aterineto: amin’ny Fiarahana toerana, na ny tambajotra sosialy. Misy manokana ny loharanon-karena, ohatra,»Aiza i dada.»Na dia eo aza ny anarany, dia mianatra avy any reny tokan-tena, ary ireo ray mitaiza ny ankizy samirery. Ny olana dia ny kajy irery ny i dada, tsy ny ray aman-dreny izay»nanome ny reny ny andro eny», ary nandeha an-tongotra niaraka ny zanany lahy na ny zanany vavy.
Azo inoana fa, maimaim-poana ny olona mihitsy ny maka ny dingana voalohany amin’ny fahazoana nahalala. Ny zavatra tsara tokony ho atao. Ny mitoetra ho mahatoky hatramin ny voalohany vadiny, izay maty, na ny mahita ny vaovao reny ho an’ny ankizy.
Ity dia olana sarotra
Raha vao jerena dia toa ny fitiavan ny lehilahy iray tokony ho irery, ny anarana sy ny taonan’ny fiainana izao voasoratra ao amin’ny granita. Vehivavy tokony ho vonona amin ny zava-misy fa ny olona afaka ny ho tonga avy hatrany ny zaza. Noho izany tsy ny rehetra. Izany no tena zava-dehibe ny mahita ny fiteny iombonana amin’ny kely ny olona. Raha azo atao, ny Papa ho tsara ho Anao voaendrika. Ny zavatra hafa rehetra dia tsara tarehy fitsipika. Vao nihaona sy niresaka tamin-ny mahazatra ny olona. Angamba za-draharaha kokoa sy tompon’andraikitra noho ny hafa
← Hihaona olona dimy amby roa-polo taona ny fitiavana sy ny fifandraisana, amin'ny zodiaka famantarana Leo. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary
Fiteny portiogey Brezila tutorial maimaim-poana amin'ny aterineto i BREZILA AMIN'IZAO fotoana izao →